About Us - Heshan Ovit Jikada & Bath Industrial Co., Ltd
3D Hidden Taxanaha
Ovit Jikada & Company Bath waxa uu ku yaalaa magaalada Zhishan magaalada Heshan, xuduud salka tuubooyinka iyo iib ah caafi-dhowrka ee Shiinaha. Ovit waa shirkad xirfadeed keenidda R & D, wax soo saarka iyo iibinta.
Ovit waxaa la aasaasay sanadkii 2011. Tan iyo abuuritaanka, dhaxlidda ruuxa hal-abuurnimo, Ovit xoogga on cilmi-baarista iyo horumarinta ee ahama alaabta lagu dhaqo abuurtay. Qaadashada on fikradda ah dhisidda nolol caafimaad leh oo doog ah jikada, Ovit bilaabay on waxyaabaha taxane cusub oo S / armaajooyinka jikada S iyo golaha wasiirada musqusha ee 2016.
Iyada oo ku saabsan si ay u horumariyaan waxyaabaha cusub oo la dhiso ilaa nidaamka marketing, Ovit si joogto ah hagaajinaysaa maamulka gudaha nidaamka kaamil ah maamulka-soo-saarka iyo habka maareynta tayo leh, taas oo keenta in tayada iyo xasilloon oo lagu kalsoonaan karo jagooyinka keentay in industry ee.
In mustaqbalka, Ovit wadi doontaa in ay ka hor abuurta iyo in la wanaajiyo kartida muhiimka ah, by qaadashada caafimaadka, fashion, tayo sare sida caadiga ah, ku shub samaynta raaxo badan, caafimaad, waxyaabaha ku haboon ee tayo sare leh.